Liiska Xildhibaanada Lagu Soo Doortay Baydhaba, (Aqriso)
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa noqday maamulkii labaad ee soo geba gebeeya doorashada xildhibaanada cusub ee Aqalka Hoose ee baaralamaanka Soomaaliya. Guud ahaan 69 xildhibaan ayaa lagu soo doortay doorashooyinkii ka dhacay magaalada Baydhaba. Xubno badan oo ku jira liiska ayaa ah xildhibaano hore ama kuwo dib loo soo doortay. Hoos ka aqriso liiska […]
Ruushka iyo Shiinaha oo ka hor yimid hindise QM la soo hordhigay.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa codka diidmada qayaxan u adeegsaday hindise qabyo ah oo la soo hor dhigay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, kaasoo ku baaqay xabbad-joojin muddo toddoba maalmood ah laga hirgaliyo magaalada Xalab. Ruushku wuxuu sheegay in dukumentiga uu ku xadgubayo xeerka golaha ee u ogolaanaya in xubnuhu ay qaataan muddo 24 saac ah […]
Madaxweynaha oo ka hadlay Doorashooyinka 2016-ka
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismayo ee caasimada Dowlad Goboleedka Jubbaland, halkaas oo uu si diiran ugu soo dhoweeyey Mudane Ahmed Mohamed Islam (Madoobe), Madaxweynaha Jubbaland, ku xigeenadiisa, Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Mudane Abdulkadir Sheikh Ali Dini, Wasiirka Boostada & Isgaarsiinta Maxamed Jamac Mursal (Geele), Wasiiru Dowlaha Xafiiska […]
December 5th, 2016 | Posted in Arimaha Bulshada,Wararka | Read More »
Dab Khasaaro geystay oo ka dhacay Gobolka California.
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay debkii ka kacay magaalada Okland ee Gobolka California Dalka Mareykanka. Tirada dhimashada ayaa sii mareysa ilaa 33 ruux kuwaasoo dabku ku qabsaday gudaha daartaasi halka tirointaas ka badan ay ku dhaawacmeen. Debka oo kacay dabaqa kore ayaa la soo sheegayaa inay macquul tahay in dhimashadu sii kororto xili kooxaha […]
Xasan Sheekh oo lagu soo dhaweeyay Magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray Magaalada Kismaayo halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay markii diyaaradii siday ay caga dhigatay. Mas’uuliyiinta maamulka Juba ayaa soo dhaweeyay Madaxweynaha waxaana loo galbiyay dhanka madaxtooyada halkaasoo ay ka socoto xiligaan kulan labada dhinac u dhexeeya. Sida warka saaka aan idiinku sheegnay safarka madaxweynaha ayaa la xiriira arimaha […]
Dubabka Dhaqanka” Doorashada halgu qabto Xarunta Xalane dhexdeeda”
Odayaasha Dhaqanka Ee ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ayaa Codsaday in Doorashadooda lagu qabto Xarunta ugu weyn Ciidamada AMISOM ee Xalane. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake ayaa sidoo kale Warqad uu soo saaray waxaa uu ku sheegay inuu soo dhaweynayo Go’aanka Odayaasha Dhaqanka ee ka soo jeeda Somaliland.
Ra’iisul wasaaraha Taliyaaniga, Matteo Renzi oo is casilay.
Ra’iisul wasaaraha dalka taliyaaniga, Matteo Renzi, ayaa is casilay ka dib markii looga guuleystay aftidii loo qaaday is bedel lagu sameeyo dastuurka dalka. Shir jaraa’id oo xalay uu qabtay wuxuu ku sheegay inuu qaadayo masuuliyadda natiijada ka soo baxday aftida. Siyaasiyiintii u ololeyneysay diidmada isbedelka ayuu ugu baaqay inay qorshe cad soo gudbiyaan. Natiijada hordhaca […]
Dil la xiriira Aano Qabiil oo ka dhacay Sh,hoose.
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha Hoose gaar ahaan Degmada Kuntuwaarey ee isla Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in lagu dilay Wiil uu dhalay Nabaddoon Caan ka ah Gobolka Shabellaha Hoose oo la yiraado Axmed Xasan Abuukar Xasan. Dilka ayaa la sheegay in Koox Dableey ah ay geysteen,kuwaas oo Goobta ka baxsaday. Goobjoogeyaal ayaa Noo Xaqiijiyay […]